Fanontaniana napetraka matetika momba ny fanodikodinam-bola na Hawala any Emirà Arabo Mitambatra: Hiatrika asa famaizana ve aho? 0
Famotsiam-bola na Hawala any UAE
Ny fanodikodinam-bola na Hawala any UAE no teny mahazatra ampiasaina hanondroana ny fomba fanodinkodinan'ny mpanota ny loharanom-bola. Ny fananana ny vola azo avy amin'ny asa ratsy dia takona amin'ny alàlan'ny fanaovana tombony toy izany toa loharano tsara. Ny fomba fanao ahafahan'ny olona manana heloka bevava esorina amin'ny heloka bevava dia misasa malalaka.
Ny toetran'ny vokatra sy serivisy omen'ny sehatry ny serivisy ara-bola (manokana, ny fikirakirana, ny fifehezana ary ny fananana vola an'ny hafa) dia midika fa iharan'ny fanararaotana ataon'ny mpanodinkodin-bola ny indostria. Ny fandikan-dalàna amin'ny famotsiam-bola dia manana endrika mitovy amin'izany manerantany. Hahita singa roa tena ilaina amin'ny fandikan-dalàna fanodikodinam-bola ianao:
Ny hetsika takiana amin'ny famotsiam-bola, izany hoe ny famatsiana tolotra ara-bola; ary
Izy io dia ambaratongam-pahalalana na fiheverana ilaina (na subyektif na tanjona) mifandraika amin'ny famatsiana ny vola na ny fihetsiky ny mpanjifa.
Ny hetsika fanasan-damba na hawala dia atao amin'ny toe-javatra izay nandraisanao andraikitra (izany hoe tamin'ny fanomezana tolotra na varotra). Io fandaminana io dia mitaky ny vola azo avy amin'ny asa ratsy.
Ny lalàna mifandraika amin'izany mifehy sy manasazy ny fanodikodinam-bola any UAE dia ny lalàna mivoaka federaly laharana faha 20/2018 ary ampian'ny lalàna AML federaly. Any UAE, toy ny ankamaroan'ny faritra, dia heverina ho heloka bevava lehibe izany ary mety hiteraka sazy toy ny fanagadrana sy fanasaziana sazy lehibe rehefa voaheloka ianao. Ity lahatsoratra ity dia mikendry ny hanampy anao hahafantatra ny atao hoe famotsiam-bola, fomba fanao mahazatra ampiasain'ny mpanao heloka bevava, valiny amin'ny fanontaniana napetraka matetika momba ny asan'ny Hawala, ary ny fomba fitantanana azy ireo any UAE.
Ity misy fanontaniana matetika momba ny fanodinana vola any UAE:
Inona ny tanjon'ny money laundering / Hawala?
Ny tanjon'ny famotsiam-bola dia ny hahazoana vola mora foana, tsy misy hatsembohana ary tsy mila asa mafy. Raha tokony hahazo vola amin'ny fomba ara-dalàna izy dia afaka manodinkodina ny tantara ilay olona ary misoroka ny fananganana amin'ny vola mora mandeha ary tsy mandoa hetra.
Famotsiam-bola eo ambanin'ny Article 2 amin'ny lalàna federaly No. 20/2018 dia manome:
"1-Olona manana ny kfantaro izao fa ny vola dia avy amin'ny heloka bevava na hadisoana, ary minia manao an'ireto fihetsika manaraka ireto, dia horaisina ho tompon'andraikitra amin'ny heloka amin'ny famotsiam-bola:
a-Famindrana na famindrana ny vola azo na fanaovana raharaham-barotra amin'ny tanjona hanafenana na hanafenana ny loharano tsy ara-dalàna.
b-Manafina na manafina ny tena toetra, loharano na toerana misy ny vola azo ary koa ny fomba mahatafiditra ny toetrany, ny fivezivezeny, ny fananany na ny zony mikasika ireo vola azo ireo.
c-Mahazo, manana na mampiasa vola azo rehefa nahazo.
d-Manampy ny tompon'andraikitra amin'ilay fandikan-dalàna mialoha hialana amin'ny sazy.
2-Ny heloka amin'ny famotsiam-bola dia heverina ho heloka tsy miankina. Ny fanasaziana ny tompon'antoka tamin'ilay fandikan-dalàna mialoha dia tsy tokony hanakana ny saziny noho ny heloka amin'ny famotsiam-bola.
3-Ny fanaporofoana ny loharanom-bola tsy ara-dalàna amin'ny vola azo dia tsy tokony hametrahana fepetra mialoha hanamelohana an'izay nanao ny heloka bevava.
Raha fintinina, ny famotsiam-bola dia mitaky ny fomba hahazoana vola tsy ara-dalàna amin'ny fisandohana hahazoana ara-dalàna.
Mahomby ve ny fahitana amin'ny faminavina ny famotsiam-bola?
Matetika, ireo tsy fitoviana tafiditra amin'ny famaritana dia azo fintina toy izao manaraka izao:
Ny fahasamihafana amin'ny hamafin'ny fandikan-dalàna dia raisina ho ampy hamelezana mialoha ny fandikan-dalàna amin'ny famotsiam-bola. Ohatra, amin'ny manam-pahefana sasany, dia takatra fa ny fanodikodinam-bola dia fandikan-dalàna izay azo saziana amin'ny fanagadrana mandritra ny taona iray na maromaro. Amin'ny manampahefana hafa, ny sazy tsy maintsy atao dia mety higadra telo ka hatramin'ny dimy taona; na
Ny vahaolana dia mamaritra ny dikan'ny fandikan-dalàna tafiditra ao anatin'ny lalàna momba ny fanodikodinam-bola manam-pahefana manokana.
Ny fandikan-dalàna hafa sy ny fandosirana hetra dia raisin'ireo manam-pahefana voafehy tsara indrindra manerantany ho toy ny fandikan-dalàna mialoha ny famotsiam-bola.
Nahoana no voarara ny famatsiam-bola any UAE, Dubai, Abu Dhabi ary Sharjah?
Ny tanjon'ny famotsiam-bola dia ny hahazoana tombony amin'ny heloka bevava. Ny fanamarinana amin'ny fampandrosoana ny fandikan-dalàna dia ny tsy fetezan'ny olona sy ny fikambanana manampy ny mpandika lalàna mahazo tombony amin'ny tombony azo amin'ny fihetsika tsy ara-dalàna na hanamorana ny fanatanterahana ireo asa ratsy ireo amin'ny fanomezana serivisy ara-bola azy ireo.
Mivelatra ny fomba fanao. Olona na raharaham-barotra mifampiraharaha amin'ny fifanakalozana isan-karazany, ny ankamaroan'ny karama izay tsy voadio.
Ny famotsiam-bola any UAE dia raisina ho fomba fiasa izay miseho amin'ny dingana telo miavaka.
Ny dingana lehibe amin'ny fomba fiasa, rehefa 'voasasa' ny fananana ary miafina ny fananany sy ny loharanony.
Ny fampidirana, ny dingana farany, izay hamerenana amin'ny laoniny ny tsena "laundered" amin'ny tsena ara-dalàna.
Ny marina dia matetika ireo antsoina hoe dingana no mifindrafindra; indraindray (ohatra, amin'ny tranga misy heloka bevava ara-bola), dia tsy mila 'apetraka' ny tombom-barotra.
Izay olona minia manao zavatra tsy ara-dalàna ka mahalala fa ny vola dia vokatry ny heloka bevava na hadisoana dia tokony hoheverina ho nanao heloka bevava fanadiovana vola.
Fa maninona no tsy manara-dalàna ny fitrandrahana vola?
Amin'ny fehezanteny tsotra indrindra, ny famotsiam-bola dia mitaky fitaterana vola azo avy amin'ny hetsika tsy ara-dalàna mankany amin'ny lalana "ara-dalàna" mba hanakonana ny loharanom-baovao tsy ara-dalàna. Mifanaraka amin'ny lalàna nasionaly, ny famotsiam-bola dia mitranga rehefa misy manandrana manafina na manafina ny loharano, ny toerana, ny natiora, ny fananana na ny fitantanana ny vola azo amin'ny hetsika tsy ara-dalàna.
Ny antony mahatonga ny famotsiam-bola dia mety hiseho mazava: hanafina ny loharanom-bola. Ireo izay manao hetsika tsy ara-dalàna avy hatrany dia lasa manam-pahalalana momba ny fampiasana diso lalana momba ny loharanom-bola na manafina ny tena vola miditra sy harena. Mazava ho azy fa ny faneva io ho famatsiana fidiram-bola dia mety hiteraka famotopotorana eo noho eo ny fihetsiky ny tsirairay, saingy misy ny fomba hitazomana azy ara-dalàna raha misy mahazo vola!
Ny fanodikodinam-bola any UAE dia mety manomboka amin'ny paikady mahitsy hatrany.
firafitra: Ny fandrafetana dia ny fakana vola kely kokoa ary apetraho ireo, avy eo mividy fitaovam-piadiana, anisan'izany ny kaom-bola.
an-tsokosoko: Fanondranana an-tsokosoko vola any amin'ny manam-pahefana hafa, amin'ny ankapobeny dia vahiny, ary fametrahana azy any amin'ny banky amoron-tsiraka izay manana tsiambaratelo lehibe kokoa na tsy hentitra amin'ny fampiharana ny fanodinkodinam-bola.
Orinasa mafana fo: Ny orinasa mazàna mandray anjara amin'ny fahazoana vola dia mampiasa ny kaontiny hametraka vola azo antoka sy azo antoka, mitazona azy rehetra ho tombony azo. Araka izany, ny orinasa dia tsy manana vidiny miovaova, noho izany dia sarotra ny mahita ny tsy fitoviana amin'ny vidin'ny varotra. Ohatra amin'izany ny filokana filokana, ny club club, ny fandriana fanaovana tanna, na ny tranobe.
Fivarotana miorina amin'ny varotra: Fangatahana ambany na manara-penitra hanakona ny hetsika vola.
Orinasa sy tokiny: Ny orinasa Shell sy ny fitokisana dia manafina ny tena tompon'ny vola. Ny fiaran'ny orinasa sy ny fitokisana, mikasika ny fahefana, dia tsy mila manambara ny tena tompony.
Misambotra ny banky: Ny mpandika lalàna na ny mpamatsy vola dia mividy zana-bola mifehy ao amin'ny andrim-bola iray, matetika amin'ny manam-pahefana vahiny manana fifehezana tsy fahita vola, ary mamindra vola amin'ny banky tsy misy fandinihana.
trano filokana: Ny olona iray mividy mpikarakara ary mandeha mivantana ao anaty casino iray misy vola, milalao mandritra ny fotoana kelikely, avy eo mandrehitra tsipika, mitaky fandoavam-bola. Ny mpamaky vola dia nametraka ny taratasim-bola tao amin'ny kaontin'ny banky, nihazona izany ho fandresena amin'ny lalao.
Varotra sy hofa Fananana Mifaka: Ny trano dia mety mividy olona mampiasa tombony tsy ara-dalàna; ny olona avy eo mivarotra ny trano. Ny tombom-barotra avy amin'ny varotrao dia mijery ny any ivelany toy ny fidiram-bola mety. Fa tsy izany, ny vidin'ny trano dia voafitaka; nanaiky ny fifanarahana nataonao izay manondro ny lanjan-trano ny mpivarotra, ary mahazo tombony amin'ny heloka bevava hanonerana ny tsy fitovizany.
Inona ny sazy amin'ny fanodinkodinana vola any UAE?
Heloka be ny fanodinkodinana vola any UAE noho ny lanjany iraisam-pirenena; tena fitambaran'ny lalàna iraisam-pirenena sy nasionaly io. Ny sazy dia mety ho tafiditra amin'ny sokajy efatra lehibe:
Fanitsakitsahana lehibe tokoa izany mety ho azon'ny olona voajanahary atrehana, ankoatry ny zavatra hafa, sazy na fanagadrana. Raha sanatria ka misy olona fantatrao fa voampanga ho nandoto vola dia mila mangataka torohevitra ara-dalàna avy hatrany ianao. Amin'ny alàlan'ny fanakaramana mpisolovava, dia hapetraka amin'ny toerana mety ianao mba hampihenana ny vokatry ny sazy mihatra aman'endrika na hiadiana amin'ireo fiampangana ireo.
Ny sasany amin'ny onitra ara-bola eo ambanin'ny AML dia ireto manaraka ireto:
Amin'ny ankapobeny, ireo voasazy rehetra dia matanjaka kokoa noho ny eo ambanin'ny lalàna AML teo aloha.
Sazy fanaraha-maso araka ny andininy faha-14 amin'ny lalàna federaly laharana faha-20/2018, 50,000 ka hatramin'ny 5 tapitrisa AED ary mandrara ny asan'ny orinasa, ny fameperana ny governemanta, ny fisamborana ary ny fanafoanana ny fahazoan-dàlana.
Sazy 100,000 5 ka hatramin'ny XNUMX tapitrisa AED ary fanagadrana hatramin'ny folo taona.
Ny tsy fahazoana manao tatitra momba ny famadihana Suspect dia ho sazy amin'ny alàlan'ny fampidirana am-ponja na fandoavana onitra 300,000 AED ary 50,000 AED.
Ny fitsipahana lehilahy iray izay manontany momba ny fifamoivoizana amin'ny ahiahy dia ho voasazy amin'ny fampidirana am-ponja hatramin'ny herintaona na onitra 100,000 10,000 AED ka hatramin'ny XNUMX XNUMX AED.
Ny fanitsakitsahana ny fangatahana ny vahaolana amin'ny seranam-piaramanidina dia ho sazy amin'ny alalan'ny lamandy na fampidirana am-ponja.
Tsy toa ny Lalàna AML teo aloha, ny lalàna AML vaovao dia mifehy ny famatsiam-bola ataon'ireo fandaminana tsy ara-dalàna, ny famatsiam-bola ny fampihorohoroana na ny fanakorontanana ny tombom-barotra amin'ny fandaniana vola.
Ankoatr'izay, AML dia manome fa ny vola azo amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'ny fanodikodinam-bola dia miteraka fiatraikany amin'ny sazy mihatra.
The Lalàna AML vaovao manana sazy henjana kokoa noho ny tanjon'ny ady amin'ny famotsiam-bola any UAE.
Ankoatr'izay, ny lalàna dia miresaka momba ny famatsiam-bola ho an'ireo fikambanana tsy manara-dalàna, izay mandroso hatrany, satria ny famotsiam-bola dia matetika mifandray amin'ny Famatsiam-bola ho an'ny asa fampihorohoroana na fikambanana tsy ara-dalàna ary koa ny famatsiam-bola amin'ny asa fampihorohoroana araky ny lalàna federaly laharana 7/2014.
Ny soso-kevitr'ilay mpanao lalàna UAE dia nanoro hevitra fa ny heloka bevava ara-bola dia tsy leferin'ny UAE ary manantitrantitra fa tsy maniry ny hiheverana ny fiarovana ny fandoavan-ketra ny UAE.
1 nieritreritra ny “Fanontaniana Fametraky ny besinimaro momba ny fanodikodinam-bola na Hawala any UAE: Hiatrika famaizana ve aho?”
Novambra 28, 2016 amin'ny 8: 31 am
Najanona ny vadiko tao amin'ny seranam-piaramanidina ao Dubai fa nilaza ny tsy fahazoan-dàlana vola izy fa nandeha niaraka tamin'ny vola be dia nalainy tao amin'ny banky UK izy dia nanandrana nandefa vitsivitsy tamiko izy ireo fa ny rafitra izay misy eo amin'ny banky ary tsy afaka manao an'io ary ny vola rehetra izay ananany dia ao aminy.
Ny zanani-vavy dia vao avy nanao fandidiana hataony ary halefa hiala hopitaly any Angletera ary tsy hanana toerana handehanany dia 13 taona izy.
Ny manamboninahitra ao amin'ny seranam-piaramanidina dia milaza fa mila mandoa ny vola 5000Dollars saingy nalain'ny manamboninahitra ny volany rehetra.
Azafady, ny vadiko dia lehilahy tsara fady izay maniry hody ary hitondra ny zanany vavy eto Afrika Atsimo
Inona izao ataontsika izao raha kely indrindra raha hanampy ny torohevitra